Home News MW Farmaajo oo caawa Beesha Caalamka qadka teleefanka ku canaanatay?
MW Farmaajo oo caawa Beesha Caalamka qadka teleefanka ku canaanatay?
Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa uu shaki galiyay ka qayb galkiisa shirka Brussels. Farmaajo oo horay u balan qaaday in uu qayb ka noqonayo shirka ayaa maalmihii u danbeeyay ka caga jiiday in uu shirkaas ka qayb galo. MW Farmaajo oo aan marnaba sheegin sababta uu shirkaas uga baqanayo ayaa abuurtay walwal iyo in dib loogu noqdo qaabka shirku u dhacayo. Wadamada qaar ayaa ayaga oo xushmeeynaya dowlada iyo shacabka soomaaliyeed go’aansaday in ay wafti heer sare ah u soo diraan shirka laakiin maalmihii u danbeeysay waxa ay goosteen in ay soo diraan wafdi hoose maadaama aan la ogaynin in MW Farmaajo shirkaas ka soo qayb gali doono.
Madaxa Arimaha Dibada ee Midowaga Yurub Federica Mogherini ayaa fartiin canaan ah u soo dirtay MD Farmaajo iyo RW Kheyre iyada oo ku eedaynaysa in ay lumiyeen kalsoonidii beesha caalamka. Warar hoose oo ay heshay shabagada MOL ayaa sheegaya in RW Xassan Kheyre uu ka dabeeyo dareenka ah in shirka qiimahiisa hoos loo dhigo si uu ugu xumeeyo MW Farmaajo oo ay xarguf siyaasadeed soo kala dhex gashay bilihii u danbeeysay. Ilaa caawa ma cada in MW Farmajao berito u safri doono dalka Belguim iyo kale. Laakiin waxaa ay u muuqataa in usan iska indha tiri karin canaanta beesha caalamka u soo jeedisay isaga iyo hogaankiisa.
Previous articleShirka Brussels oo go’aanadii ka soo bixi doono la baafiyay! Maxaa loo aadayaa?
Next articleTaliyihii Laga Soo celiyaya Kismaayo oo abaabul dagaal kawado Garbahaareey
Xildhibaan shalay geeryooday oo Muqdisho lagu aasay